FAMBOLEN-KAZO TAO ATSINANANA : Tsy nisy fizarana rano sy sakafo maivana tahaka ny mahazatra
Sambany teo amin’ny tantaran’ny fambolen-kazo natao tao Toamasina ny tsy nisinisy intsony ny fizarana rano fisotro sy sakafo maivana tahaka ny mahazatra nozaraina amin’ireo mpamboly hazo. 7 mars 2018
Tsy nisy ihany koa rano ho fanasan-tanana. Tsy nisy anefa ny filazana mialoha fa tsy hisy ireo zavatra ireo ka tsy nisy niomana. Ireo ankizy mpianatra no tena nampalahelo tamin’izany.
Izay no azo ilazana ny fambolen-kazom-paritra Atsinanana ny zoma 2 marsa teo izay notontosaina tao amin’ny alan’Analamena fokontany Mahatsara voalohany Kaominina ambanivohitra Ampasimbe-Onibe, disitrikan’ i Toamasina faharoa izay miala 4 km ny lalam-pirenena fahadimy. Anaty ala izay tsy ahitana mpivarotra na iray aza.
Vaky menomenona noho izany ireo mpamboly hazo vokatry ny tsy fisian’ny rano na sakafo maivana. Raha iverenana ny fambolen-kazo natao tao Analamena ity, dia zana-kazo kininina miisa 4 000 no novolena tamin’ny velaran-tany 3 ha. Fambolena- kazo nampitondraina ny lohahevitra hoe : " Fambolen-kazo mahomby, antoka ho an’ny fihariana maharitra ara-toekarena".